တာဝန်တွေပြီးဆုံးလို့ ဖောင်ကြီးကနေပြန်လာပေမယ့် အဝေးကနေပဲ အမေ့ကိုနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ မောင်လေးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင် – Askstyle
တာဝန်တွေပြီးဆုံးလို့ ဖောင်ကြီးကနေပြန်လာပေမယ့် အဝေးကနေပဲ အမေ့ကိုနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ မောင်လေးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်
သရုပ္ေဆာင္ နႏၵာလိႈင္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္ပိုင္း အနုပညာေလာကနဲ့ လံုးဝအဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နႏၵာလိႈင္က အရင္လို ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ မရိုက္ကူးျဖစ္ေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ သူမရဲ့ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို စိတ္ဝင္စားစြာနဲ့ ေစာင့္ၾကည့္အားေပးေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နႏၵာလိႈင္ရဲ့ ေမာင္အရင္းေလးျဖစ္သူ သရုပ္ေဆာင္ ေမာင္ကလည္း အရင္လို အနုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြ မလုပ္ကိုင္ေတာ့ေပမယ့္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမာင္ကေတာ့ သူကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ေဆးပညာနဲ့ ေဖာင္ၾကီးကုိဗစ္စင္တာမွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာဝန္အျဖစ္ တစ္လတာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ဒီေန့မွာေတာ့ တာဝန္ေတြျပီးဆံုးလို့ ျပန္လာခဲ့ျပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင့္ရဲ့အစ္မျဖစ္သူ နႏၵာလိႈင္ကလည္း ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပဲ မိခင္ၾကီးဆီလာေရာက္နႈတ္ဆက္တဲ့ ေမာင့္အေၾကာင္းကို “စိန္စိန္ျပန္လာပါၿပီ။ ေမေမ့ကို လာႏႈတ္ဆက္ၿပီး သူ႔အခန္းမွာႏွစ္ပတ္ေနရပါမယ္။ ၿပီးမွအိမ္ျပန္လာပါမယ္။ Congratulations! ေဒါက္စိန္” ဆိုျပီး ေျပာျပလာပါတယ္။
နႏၵာလိႈင္ကေတာ့ ျပည္သူေတြအက်ိဳးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ကူညီေပးခဲ့တဲ့ ေမာင့္အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္တစ္ေယာက္ ဒီထက္မက အမ်ားအက်ိဳးကို ငယ္ပိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေစေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်ကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာလောကနဲ့ လုံးဝအဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်က အရင်လို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်ကူးဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်အားပေးနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မောင်အရင်းလေးဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် မောင်ကလည်း အရင်လို အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မလုပ်ကိုင်တော့ပေမယ့် ဆရာဝန်တစ်ယောက်အဖြစ် လူချစ်လူခင်ပေါများနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်ကတော့ သူကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ထားတဲ့ ဆေးပညာနဲ့ ဖောင်ကြီးကိုဗစ်စင်တာမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်အဖြစ် တစ်လတာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ တာဝန်တွေပြီးဆုံးလို့ ပြန်လာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင့်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ နန္ဒာလှိုင်ကလည်း ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ မိခင်ကြီးဆီလာရောက်နှုတ်ဆက်တဲ့ မောင့်အကြောင်းကို “စိန်စိန်ပြန်လာပါပြီ။ မေမေ့ကို လာနှုတ်ဆက်ပြီး သူ့အခန်းမှာနှစ်ပတ်နေရပါမယ်။ ပြီးမှအိမ်ပြန်လာပါမယ်။ Congratulations! ဒေါက်စိန်” ဆိုပြီး ပြောပြလာပါတယ်။
နန္ဒာလှိုင်ကတော့ ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ မောင့်အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်တစ်ယောက် ဒီထက်မက အများအကျိုးကို ငယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။